Jereo ireo nosy tsara indrindra any Gresy | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | General, Gresy, nosy
Manana nosy maro i Gresy fa tsy afaka nahita tanteraka izahay, saingy fantatray fa ny sasany no tena lehibe. Maro amin'izy ireo no nanjary toerana fizahan-tany ary manan-danja amin'ny hatsaran-tarehiny, toerana nofinofy izay manome kolontsaina sy zaridaina mahafinaritra ho antsika. Izany no antony hijerentsika izay nosy tsara indrindra any Gresy.
En Gresy dia betsaka ny nosy azo tsidihina izany, izay azo tratra avy any Atena. Ka manaova lisitry ny toerana tokony ho hitanao raha mikasa ny hahita ny faritra rehetra any Gresy ianao. Ny toetrandro mediteraneana dia mety indrindra hankafizanao ny torapasika tsy mampino nefa mbola betsaka ny zavatra azo jerena.
Ny nosy Santorini dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra eran'i Gresy. Ity nosy tsara tarehy ity dia eo akaikin'i Atena amin'ny alàlan'ny sambo. ny Ny tanànan'i Oia dia iray amin'ireo teboka afovoany ary toerana izay efa mpizahatany izao, misy trano honenana maro. Fa io ihany koa no toerana tsara tarehy indrindra eto amin'ny nosy, miaraka amin'ireo trano fotsy misy tafo manga sy ny fahitany ny ranomasina, indrindra amin'ny ora filentehan'ny masoandro. Tsy maintsy midina amin'ny seranana taloha ianao hijery ireo sambo mpanjono kely, ny atmosfera ary ireo toerana kely hanandrana ny gastronomia grika. Fira dia iray amin'ireo toerana tian'ny mpizahatany hipetrahana ary afaka mahita teboka hafa toa an'i Imerovigli, Pyrgos na Megalochori ianao. Mikasika ny moron-dranomasina misy azy ihany dia misy ny sasany toy ny Red Beach, izay fantatra amin'ny lokon'ny fasika na Perissa, morontsiraka fasika mainty tsara tarehy.
Ity dia iray amin'ireo nosy lehibe any Gresy, toerana nisy ny Colossus of Rhodes, sarivongana lehibe iray noravana tamin'ny horohoron-tany taon-jato maro lasa izay. Ny tanànany medieval dia toerana tena tsara tsy hadino. Ao anatin'ity tanàna ity dia misy toerana toy ny Calle de los Caballeros taloha, arabe mifamezivezy tsara tarehy izay ahitanao ny Lapan'ny Grand Master na ny Hospital de los Caballeros. Toerana hafa izay azo jerena dia ny Archaeological Museum of Rhodes na ny Acropolis.
La Nosy Mykonos no iray hafa be mpitady indrindra, indrindra fa nanjary nosy misy toerana maro hanaovana fety sy hankafizana izy io. Ao Mykonos dia mila mankafy ny tanànan'ny taloha Chora ianao, mandehandeha eny amin'ny arabe sy mahita trano tsara amin'ny toerana toa ny manodidina an'i Kastro. Ny orinasa Kato Milli dia efa andrim-panjakana ao amin'ny nosy ary manana ny fomba fijerinay tsara izahay avy eo amin'ny toerana misy azy ireo. Ianao koa dia tsy maintsy mahita ny seranana taloha, faritra izay ahitanao trano fisakafoanana ary Little Venice, ny toerana manintona indrindra manoloana ny ranomasina.
Corfu Town amin'ny nosy mitovy anarana aminy dia toerana fijanonana satria be ny tolotra omena azy. La Spianada dia iray amin'ireo kianja lehibe indrindra any Gresy, akaiky izay ahitantsika ny Lapan'i San Miguel sy San Jorge, izay misy ny Museum of Art Aziatika. Ny toerana hafa dia ny lapan'ny Princess Sissi, izay ny Achilleion Palace izay nialokalokan'ny Empress Sissi na ny morontsiraka lehibe Corfu.
La nosy volkanika Milos iray hafa izay azontsika vangiana. Manana morontsiraka fitopolo eo izy ary manana faritra be fasika izay ahafahanao mankafy ny toetrandro tsara, toa an'i Sarakiniko na Paliorema. Kleftiko dia teboka mahaliana iray hafa, famolavolana vatolampy eo afovoan'ny ranomasina miaraka amina tamba-johy lava-bato. Ny catacombs Milos ao Trypiti dia iray amin'ireo tranainy tranainy indrindra, manana ampahany kely misokatra ho an'ny besinimaro. Tsy azo hadinoina koa i Plaka, renivohitr'i Milos, miaraka amin'ireo trano fotsy tsara tarehy ary koa amphitheater romana manatrika ny ranomasina.
Crete dia toerana manan-tantara iray hafa, ary koa nosy tena tsara tarehy. Amin'ity nosy ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny sivilizasiona Minoana ianao, iray amin'ireo tranainy indrindra fantatra any Eropa. Avy eto ny angano malaza an'ny minotaur. Androany dia azo atao ny mitsidika ny Knossos Palace, kilometatra vitsivitsy monja miala an'i Heraklion. Eto amin'ity renivohitra ity isika dia mahita toerana manan-tantara manana làlana, kianja ary toerana mahafinaritra toa ny trano mimanda Koules na ny Katedraly San Minas. Tanàna iray hafa tsy tokony hohadinoina i Chania, toerana misy hatsarana tena tsara, arahin'ny morontsiraka Elafonisi malaza.
Ity nosy izay an'ny nosy Ioniana any Gresy ity. Atsipazo ny morontsiraka maro toa an'i Navagio, miaraka amin'ny hantsana tsy mampino sy sambo iray tafahitsoka ao anaty fasika Ny sariny dia iray amin'ireo malaza indrindra eto amin'ity nosy ity, izay toerana nofinofy. Any Zante dia misy toerana voajanahary hafa tsy tokony hohadinoina toy ny Blue Caves.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny nosy tsara tarehy indrindra any Gresy